BMW Urban Hybrid E-Bike - Ongororo uye Ride Zviratidzo | ebike Shuangye
musha Blog BMW Urban Hybrid E-Bike - Ongororo uye Ride Maonero
BMW Urban Hybrid E-Bike - Ongororo uye Ride Maonero
Zuva ： 2020-09-16 Zvikamu:Blog Views: 2,623 maonero
BMW Guta reHybrid E-Bike - Ongororo uye Chiitiko Zviratidzo
Iyo COVID-19 denda yakaunza zvakakosha shanduko mukutengesa kwekufambisa. Ipo kutengesa kwemotokari kwakakura kuchienderera mberi, maindasitiri akasiyana anga aine rombo shoma. Zvifambiso zveveruzhinji uye kugoverana kwerwendo vaona kudzikira kukuru, nevanhu vazhinji vachishanda vakanangana nenzvimbo inonyatso kubatsira munharaunda
Zvakadaro bhizimusi rekushambadzira rakabuda se "mukundi" mune dzino dzinetsa nguva. Uye kunyanya, iyo e-bhasikoro chikamu. Kubva pane huwandu hwekutsvagisa, tiri kuona kuwedzera kwenyika kuchovha bhasikoro. Kutengesa bhasikoro remagetsi kwakwira 84% munaKurume, 92% munaKubvumbi, uye 137% Inogona muUS. Nekudaro kukura kwakafanana kunogona kuonekwa pasirese.
Ichokwadi chaizvo kuti e-kuchovha hakugone kurapa chirwere che COVID-19, kana kumisa denda razvino, zvakadaro zvinobatsira nematanho edu ehutano uku achibvumidza vasina ruzivo kugara. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, ivo vangatobvumidza yekukurumidza kuenda. Saka nekudada kuva nee-bhasikoro inoita kunge isina bhurugwa muna 2020.
Nekudaro kuti tione kushanda kwee-bhasikoro, takasvika kuBMW yekuNorth America kutara imwe mune yega yega mbiri yavo kunze uko mabhasikoro emagetsi.
Sangana neBMW Guta reHybrid E-Bike
At $ 2,330, BMW Guta E-Bike ndiyo yakachipa pane iyo 2. Iyo BMW Energetic Hybrid E-Bike inorira mukati $ 3,260 zvisinei hazvo inouya nebhegi hombe pack uye dzimwe muridzo dzakasiyana uye mabhero. Mukuenzanisa neiye anodikamwa Energetic E-Bike, iyo Guta modhi inosanganisa yakawedzera shoma dhizaini ine mutete muviri dhizaini iyo yakanaka kune zuva nezuva zuva reguta kuenda.
Iyo matte nhema muviri inowanikwa mumatatu matatu: S, M uye L. Muviri wemazuva ano unowedzera dzimba 300 Watt-Hour rechargeable bhatiri pack. Sezvaunotarisira, bhatiri pack rinopa huremu kune e-bhasikoro iyo inoratidza saizi pa18.5 kg kana 40.7 lbs. Kwete yakareruka mukati mechikamu, kana chakanyanya kurema.
Iyo yekuvaka yepamusoro mhando yemuviri haigoneke nepo iyo minimalistic dhizaini isingaratidze. Yakawedzera yakasimba, kunyangwe iwe ukagumbuka pamusoro pemakomba uye kunyange neguruva. Ipo BMW ichimisikidza iwo e-mabhasikoro ehybrid semabhasikoro emuguta, ivo vanongogumburwa pavhu rakapfava zvakanaka.
Foshoro isingachinjiki yekushambadzira inoitwa naSuntour nepo mubato wakatsetseka, wakajairika kune bhasikoro reguta. Iyo yazvino mubato unoshandisa mashandiro maviri emitambo anobata zvakaipisisa kunyangwe aine ziya rinodikitira. Iyo forogo uye barbar inobvumidza kwekutungamira nyore, uye yakanyatso tsvedza kunyangwe mumatanho marefu.
Kutaura kwekunyaradza, chigaro chinoitwa naSelle Royal iyo yaive yakagadzirirwa zvikuru maE-Bikes. Nyaradzo yacho inoenderana nezvigaro zvemudhara. Munzira dzese dzakareba dzekutyaira, ndakaita chokwadi chekushandisa imwe shorti yebhasikoro ine padding kudzivisa kutsva. Chigaro uye chigaro chechigaro chakavakirwa-mukati, saka zviri nyore kudzora iyo yepamusoro nechigaro chinosunga chigaro.
Iyo mota yemagetsi yakavakirwa-mukati meiyo hub yekumashure iyo inowedzera dzimba dzeDeore / Shimano XT 10 magiya derailleur. Ipo ndichifambisa mukati meguta guru, ini ndakawana kaseti yacho yakaringana kutyaira kweguta, kunyangwe ndichiyedza kukasira kumhanya zvakanyanya.
Haikwanisi Kureva Kutadza Nevamwe Nice Mabhureki
Yezve simba rekumisa, iyo BMW Guta E-Bike inoshandisa iyo Shimano 180 mm hydraulic disc mabhureki. Kana iwe ukatasva ne hydraulic disc mabhureki, ipapo iwe zvechokwadi unobva waremekedza pakarepo chunk uye kubudirira. Vanoita kuti rwendo rwacho ruve rwakachengeteka zvakanyanya nekushomeka kana kusatombodiwa.
Iyo e-bhasikoro yakasvika pano yakamisikidzwa pamwe neRody Airline 4 Plus mavhiri mune makumi maviri nemasere masendimita akaputirwa muE Continental Contact cruiser matai. Ivo vatete matai mvumo yekudzikira kudzora kuramba, saka iwe unozogona kungo famba nekukasira zvakanyanya kumhanya, kunyangwe kunze kwemagetsi rubatsiro. Muchokwadi, kana iwe ukasarudza kukwira kumwe pamusoro pevhu rakafukidzwa nevhu, ipapo chitsva seti yematairi ingangodawe.
Ini zvakare ndakanyanya kufarira maficha. Ini ndakaisa padanho regumi neshangu, zvisinei ivo vaizowana pasi yakakwana kuti vagare Yeti yangu ft. Ndakawedzera ndikavawana kuti vanogunun'una, nekuda kwepini-dzakakura-pini dzakabudikira mufuratiro. Mapepa asina kutsvedza akanaka emabhasikoro emugwagwa, zvisinei ini handioni chakakosha kwavari paguta e-bhasikoro. Asi, iwe unozokwanisa kune iyo nguva yese kuchinja iwo akajairika maficha.
Kutengesa Zviri nyore
BMW yakawedzera kuita zvakanaka kuti kuchaja yavo e-bhasikoro kuri nyore sezvaingawane. Iwe unonyanya kuve nesarudzo mbiri dzekubhadhara iyo furemu-yakasanganiswa bhatiri. Uchakwanisa vese kujoina kugona kupa kune iyo bhasikoro, kana iwe uchakwanisa kutora bhatiri rongedza uye kushandisa iyo bhiriji adapta yakapihwa kudhura bhatiri.
Ikozvino bhatiri mutengo unoratidzwa pane iyo LCD show unit yakaiswa pane yekubata kana nemwenje ye LED pane bhatiri pack. Nekudaro mune chaiyo BMW vogue, ivo vawedzera imwe inotonhorera basa kuti vawane pfungwa yemutengo webhatiri. Iyo BMW yakatenderera inoisa mumagetsi emuviri zvakanyanya sekunongedzera mutengo. Inogona kunge iri miviri inopenya (yakaderera kupfuura 5%), orenji (yakakura kupfuura 5% asi iri pasi pegumi) nebhuruu.
Muhunyanzvi hwangu, zvakatora rinenge awa kuti ubhadhare bhatiri pack kubva risina chinhu. Muchokwadi iwe ungatoshamisika kuti magetsi anosiyana chii. Uye zvakafanana nemotokari dzemagetsi, zvinogona kusiyana zvakanyanya. Izvo zvinosiyana pa e-bhasikoro zvinokanganiswa nezvinhu zvakawanda zvakafanana ne: dhigirii rekubatsira, matai uye kushushikana kwematai, nzira, mamiriro ekunze, huremu uye kudzikira kwebhatiri.
Munguva yangu yese neBMW Guta e-bhasikoro, ndakagadzirisa yangu yekutyaira modhi akati wandei. Kana ini ndaimbove ndichironga yakawedzera router (20-30 mamaira), ipapo ini ndinogona kutanga rwendo nemhando yekubatsira yakaiswa ku0%. Zvino, iyo e-bhasikoro inobata yakafanana neiyo "yakajairwa" bhasikoro yaizoita. Iko kuchinja kwegear kwakachena uye iyo e-bhasikoro inogona kungosvika pakunyanyisa kumhanya mukati memasekondi.
Kune mashanu ekubatsira maseru pane BMW e-bhasikoro. Takatotaura nezve 5% degree. Iyo inotevera degree kumusoro i0% inoenderana neECO modhi pamagetsi emagetsi. Inotevera kumusoro ndeye 30% modhi, iyo COMFORT modhi - chibvumirano pakati pekubatsira uye chinosiyana.
Kusimuka uye isu tave neiyo 50% - kana iyo SPORT modhi yekupedzisira yekutyaira kumusoro. Iyo BOOST modhi inowanikwa mune pa100% iine yakazara simba remagetsi mota. Hapana imwe yema modes inoshanda yapfuura iyo 25 km / h mucherechedzo (15.5 mph).
Sezvandakambokurukura, kuronga nzira yako kunogona zvakare kukubatsira iwe kuona kuti ndedzipi nzira dzekushandisa. Ini ndanga ndichida kukwirisa kazhinji kazhinji kwete, zvisinei ini nguva dzese ndakachengetera rimwe simba remagetsi kwemamaira mashoma apfuura kugara apo kuneta kunopinda mukati.
Iyo BOOST modhi iri mhando inonakidza, kunyanya kana iwe ukasimuka pamagetsi ekumisa nemunhu wese achiyemura "hutano hwako masosi." Ini zvakare ndakazozviona zvichishamisa zvisingaite mukati mezviitiko zvishomanene nzvimbo pandakasangana nechikomo mukati medzakanaka nzvimbo dzakatenderedza dzakatenderedza Chicago.
Nekudaro ini ndinogona kuzviona ndichinyanya kutyaira mukati me30% modhi iyo inondipa simba rakaringana kumhanya munzira dzakareba dzemigwagwa yemahara, kana kana ndichifambisa kubva pakamira.
Iyo geometry yebhasikoro inogona kuve chinhu chimwe ini chandaishuvira kufarira. Kune divi L, iro repamusoro chubhu saizi iri 600 mm nepo chigaro chubhu saizi iri 540 mm. Iyo wheelbase inoyera 1099 mm ine 70 diploma musoro chubhu kona. Saka ese manhamba aya anodudzira munzvimbo isina kutyaira uye yakatwasuka nzvimbo yekutyaira. Nezvekureva, ini ndinoyera 6 ″ 3 mune yepamusoro, kana kutenderera 1.90 metres.
Ini ndiri kunyanya akajaira kutyaira mumigwagwa nemavhu emabhasikoro ane madonhwe emabhawa, zvisinei kune metropolis kuenda, mabara akapwanyika anoita zvine musoro. Ivo zvakare havana kukura zvakanyanya, zvekuti haufanire kunge uine dambudziko rekusvika padyo nemota dzinokutevera. Iyo BMW Guta reHybrid e-bhasikoro zvakare yakauya pano ine maburi akaboorwa mukati memuviri izvo zvinoita kuti iwe uwedzere akasiyana michina, semidziyo yemabhodhoro emvura kana mukwende.
Iko hakuna chero matadhigadhi akaiswa mukati kubva kunzvimbo yekugadzira, zvisinei kunyanya zvichibva pakabvumidzwa tai, iwe unofanirwa kuve nekumisikidza yako wega, kana ichidikanwa. Mukufamba kwenguva, zvaizodzivirira mukati memazuva ano akanyorova.
Iyo e-bhasikoro Inogona Kukwiridzira Yako YeMotokari
Kazhinji, ini handioni iyo BMW Guta reHybrid e-bhasikoro seimwe nzira kumotokari yako. Ipo iwo akawanda anonakidza uye akakunakira iwe, mabhasikoro haagone zvakadaro kunyatso shandura mota. Nekudaro ivo vanozovabatsira. Semuenzaniso, ini kazhinji ndakazviona ndichivimba nee-bhasikoro yekushanyira kune wekuzvitengesa wekutengesa (2 mamaira kure), zvine mwero pane kushandisa BMW i3.
Ivo vese magetsi uye zvechokwadi eco-hushamwari, zvisinei iyo e-bhasikoro iri yekuwedzera mubayiro kusvika parizvino hupenyu hwangu. Zvakare, ini ndaida chaizvo kuongorora nharaunda dzeChicago nepo ndichifambisa ndichienzanisa neshure kwegumbo. Zvinoseka kuti ingani nyaya dzauchazokwanisa kukanganwa kana iwe uri mumotokari.
Unofanirwa kuve nemota yakapamhama kana kuve nemudhudhudhu mudhudhudhu wakaiswa mukati, unozogona kutora e-bhasikoro newe parwendo rwezuva mukati mehunhu. Kune akawanda akateyiwa emabhasikoro enzira akapoterera Chicago iyo nzvimbo iwe yaunowana yakasarudzika kutyaira kwemaawa. Uye ipapo ndiyo nzvimbo iyo yemhando yakasanganiswa yebhasikoro inozoshanduka kuva inobatsira.
Mukupedzisa, panogona kunge paine nguva yese sirin'i yakadzika. Uye kwandiri izvo zvaive zvichangobva kuwanikwazve kushingairira kwekutyaira mudhudhudhu munguva dzino dzese dzinonetsa nedzakasiyana.
Iwe unozokwanisa kudzidza zvimwe maererano neEMTB Guta reHybrid E-Bike kana nekushanyira wako wekuzvitengesa mutengesi.
Prev: Vhidhiyo: Nyowani Ubisoft Vhidhiyo Game Inokutendera Iwe Kutasva Red Bull Rampage
Next: James Stanfill: Kana paimbove nenguva